अङ्ग्रेजी आइवी। बिरुवा कसरी बढ्छ र बढ्छ?
यो बिरुवा सदाबहार हो, घुमाउरो, आर्लीभ परिवारसँग सम्बन्धित छ। अङ्ग्रेजी आइवी (वा आईवी साधारण), यसको प्वालपुलहरूको लागि धन्यवाद, लगभग कुनै पनि वस्तुमा घुम्न सक्दछ, यसैले ठूलो उचाइ बढ्दै - बीस मिनेट वा बढी सम्म। यदि कुनै लामो ढाँचा वा रूखहरू छैनन् भने, यो जमीनमा फैलाउन सक्छ।
अङ्ग्रेजी आइवीले पानाहरू जस्तो मनपर्छ जस्तो देखिन्छ। फूलहरू हरियो र पहेंलो रङ छ, तिनीहरू सेप्टेम्बर-अक्टोबरमा अवलोकन गर्न सकिन्छ। बिरुवाको फल मानवलाई जहरीला छन्, तर तिनीहरू चराहरूको लागि धनी खाना हो, जसले तिनीहरूका कणमा समात्ने आईवी बिरुवाहरू पनि फैल्यो।
अंग्रेजी आईवी: प्रजनन
यो रोटी कट्टरिंग्स, गोलीहरू वा तहहरूद्वारा फैलिएको छ। Cuttings को मदद संग, ivy को रूप मा खेती गरिएको छ: cuttings कटौती र उनलाई दुई या तीन एकाइहरु मा साना बर्तन मा रोपण, त्यसपछि एक फिलिम संग कवर। यस्तो बिरुवाको लागि आदर्श मिट्टी दृढ काठसँग मिश्रित बालुवा हो। यदि कट्टरहरु को हवाई जडहरु छ भने, त्यसपछि उनको अस्तित्व को एकदम अधिक मौका छ।
आईवीलाई गोली मारिएको हो। गोली काट्नुहोस्, जुन दस पातहरू छन् र यसलाई बालुवामा राख्छन्। अब चाँडै यसलाई थिच्नुहोस् कि पत्तियां मात्र सतहमा रहन्छ। एक हप्ता वा दस दिन पछि हावा जडमा रहेको स्ट्याकमा, भूमिगत जराहरू देखा पर्दछ (रेत लगातार चिसो हुन्छ)। अब हामी गोली टाँस्नुहोस् र यसलाई काट्नुहोस् ताकि पत्तिहरू र जराहरू प्रत्येक अलग कट्टरहरूमा रहन्छन्। त्यसपछि ढोका पानीमा राख्न सकिन्छ ताकि यो राम्रो तरिकाले जडित छ, र त्यसपछि यसलाई बर्तनमा राख्न आवश्यक छ।
अङ्ग्रेजी र इन्धीको अपशिष्ट सजिलै सँगै बढिन्छ। यो गर्न को लागि, लामो लम्बाई ले लो र उनलाई स्टेपल को मदद संग जमीन मा चुन्नुहोस। केहि समय पछि, यदि देश निरन्तरता नमिलीएको छ र गोली मारिएको छ भने, जडहरू देखा पर्छ। यो बिरुवा मात्र पोट प्रत्यारोपण गर्न बिरोध हुन्छ, तर यो धेरै सावधानीपूर्वक गर्न आवश्यक छ, किनकि यो यस अवधिमा राम्रो महसुस गर्दैन र सजिलै संग तोड्न सक्दछ।
अंग्रेजी आईवी: खेती
रोपण यति सजिलो छैन। उत्कृष्ट अंग्रेजी आईवी (फोटोमा दाँया) विकास र घरमा, जसको लागि मैले आईवीई घरको उपनाम पाएको छु। यद्यपि, माटो निरन्तर गीला हुनु पर्छ, गर्मीमा यो प्रशस्त मात्रामा पखाल्छ, र जाडोमा - मध्यम। कुनै पनि प्रकार को गोदाम यस संयंत्र को लागि धेरै उपयोगी छ। स्प्रिन्डर र सजावट दिन यो यसको गोलीहरूको छोरो खिच्नको लागि सिफारिश गरिन्छ।
प्रत्यारोपण मात्र हरेक दुई वर्षमा मात्र गरिन्छ। यो गर्नका लागि, सधैँ अघिल्लो एक व्यास भन्दा ठूलो बर्तन लिन आवश्यक छ। आइयू सामान्य सूर्यको किरणको धेरै मनपर्छ, त्यसैले यो उपयुक्त स्थानमा हुर्काउनु पर्छ।
कहिलेकाँही, यो बिरुवा अझै पनि चोट लगाउन सक्छ। यदि कोठा निरन्तर तातो छ भने, अंग्रेजी इम्भीलाई डराएर क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ। प्रभावित पातहरू छाँटकाँट गर्नुहोस् र बिरुवालाई कूलर ठाउँमा राख्नुहोस्। नमी को कमी संग, तपाईं ध्यान दिनुहोस कि आईवी पत्तियां पहेंलो हुन्छ र गिर जान्छ - बिरुवा को पानी को न भूलें।
काली मिर्च: उपयोगी गुण र हेरविचार
Gourmet Early Angrapes: विभिन्न प्रकारका विवरणहरू, विशेषताहरू, जेल्डहरू र प्रतिक्रिया
Actinidia, उत्तरी काकेशस मा रोपण र नर्सिंग, वा किवी कसरी विकास गर्ने
स्पाइरा वान्गाटा - बगैचा सजावट
Tladianta (रातो कर्कर): विशेषताहरू, वर्णन र समीक्षाहरू
उपनगरीय क्षेत्रको लागि सजावटी श्रबहरू
Kypchak Khanate: मूल र इतिहास
उपत्यका - यो के हो? अर्थ "उपत्यका"
संगीतकार बोरिस Tchaikovsky: जीवनी, रचनात्मकता र रोचक तथ्य
कसरी मिसिन मा एमपी3डिस्क बाल्न। कसरी कार मा एक ड्राइभमा संगीत रेकर्ड गर्न
सिमी को Terrine - सबैभन्दा स्वादिष्ट स्यान्डविच
को चिकन, सुझावहरु व्यक्तिगत अनुभव कसरी Bake गर्न
होटल साइड (टर्की) - विश्राम लागि सबै भन्दा राम्रो सुविधा
कसरी फसल उत्कृष्ट हासिल गर्न मा ग्रीनहाउस मा टमाटर हेरचाह गर्न?
जूता "एवन": समीक्षा, उत्पादन जानकारी
कसरी हिउँदमा प्लम देखि जाम तयार
काटयो रजत बालुवा Eazy3* (थाईल्याण्ड, फुकेत) द्वारा: होटल, सेवा, को विवरण
झूट हाम्रो मस्तिष्क र शरीर असर रूपमा?